'ကြောက် ကြောက် ကြောက် ၂ မှာ နေမင်းအောင် (သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး) မပါတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ Feel ဖြစ်တယ? - Yangon Media Group
‘ကြောက် ကြောက် ကြောက် ၂ မှာ နေမင်းအောင် (သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး) မပါတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ Feel ဖြစ်တယ?
ယခုနှစ်ပိုင်း ပရိသတ်နဲ့နည်းနည်း အလှမ်းဝေးနေတဲ့ ထွန်းထွန်း၊ လတ်တလော သူ့အနုပညာ ဘာ တွေလှုပ်ရှားနေသလဲ။ ထွန်းထွန်း နဲ့တည့်တည့်တိုးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေ ကို အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်။
မေး။ ။ လတ်တလောအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖြစ် နေလဲ။
ဖြေ။ ။ အခုကတော့ ကျွန် တော် ကြောက် ကြောက် ကြောက် ၂ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ဖို့ရှိ ပါတယ်။ နောက် ကျားနဲ့ဆင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါ တယ်။
မေး။ ။ ကြောက် ကြောက် ကြောက် ၂ မှာရော ဘယ်လို ကာရိုက်တာမျိုးဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ၁ မှာတုန်းက ကာ ရိုက်တာကတော့ ပိုပြီးတော့ ထင် ထင် ရှားရှားဖြစ်တယ်။ အခု ၂ မှာကျတော့ ကာရိုက်တာအရပြော မယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းသဘော အရ သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချွန်ထွက်နေတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးမှာ တော့မပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းကိုတစ် ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပံ့ပိုးခွင့်ရ တဲ့ ကာရိုက်တာကနေ သရုပ် ဆောင်ခွင့်ရထားပါတယ်။ အလုပ် အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်။ စိတ်ထဲမှာ Feel ဖြစ်နေတာ ကတစ်ခုပဲ။ ၁ တုန်းက ဟိုကောင်နေမင်းအောင် (သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး)ပါတယ်။ ၂ မှာကျတော့ လူစုံပြန်ပါချင်တဲ့ စိတ်ရှိ တယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲ ပြန်ရိုက်ခွင့်ရ တဲ့ဇာတ်ကားမှာ လူမစုံဘူး။
မေး။ ။ မင်းသွေးနဲ့ကျတော့ ဘယ်လို အမှတ်တရတွေရှိခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။ မင်းသွေးနဲ့ကတော့ အမှတ် တရတွေအရမ်းများတယ်။ ဒီကောင်က အလုပ်ကိုအစောကြီး လာတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ကျ မှပြန်တတ်တယ်။ ဒီကောင်ကို တော့ အရမ်းသတိရတယ်။ သူပြ သွားတဲ့ တရားကကြမ်းတယ်။ လူတိုင်းက သေမှာကိုသိတယ်။ ဒါ ပေမဲ့လည်း လက်မခံနိုင်အောင် လုပ်ပြသွားတာ သူက သူနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ အလုပ်တွေကိုကူညီပေးမယ်။ ကု သိုလ်ကောင်းမှု တွေလုပ်ပေးမယ်။ သတိရတယ် အရမ်းပဲ။
မေး။ ။ ‘လေးပါးကျော့ရှိန်ဝရဇိန်’ဇာတ်ကားကရောဘယ်တော့ လောက် ရုံတင်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ လေးပါးကျော့ရှိန် ဇာတ်ကားက သူ(သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး)နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရုံအတင်စေချင်ဆုံး ဇာတ်ကားပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အဲဒီ ဇာတ်ကားမှာ ကျွန်တော်ဆိုရင် ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဇာတ် ညွှန်းဖတ်တယ်။ အဝတ်အစား တွေပြင်ဆင်တယ်။ ဒီအချိန်သွား မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ စိတ်နှစ်ပြီး တော့ ကာရိုက်တာကိုလုပ်လိုက် တယ်။ ဒါပဲ။ သူကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ မရိုက်ခင်ကတည်းက Location ကိုသူရှာတယ်။ ငရုတ် ကောင်းကျွန်း အကျော်ဘက်မှာ သူ့အဒေါ်ရှိတော့ အခေါက်ခေါက် အခါခါသွားတယ်။ အပင်ပန်းခံပြီး တော့လုပ်တယ်။ ဆံပင်ရှည်ထား ပြီးတော့ ကာရိုက်တာဝင်အောင် လုပ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ ဇာတ်ကားကို အမြန်ဆုံး ရုံတင်စေ ချင်တယ်။ နောက် ‘သတ်ကွင်း’ ကိုလည်း မြန်မြန်ရုံတင်စေချင် တယ်။
မေး။ ။ အခုနောက်ပိုင်း ပျောက်နေတယ်နော်။ ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်နေတာလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်ကို သိပ်မ တွေ့ရဘူးဆိုတာက Facebook သိပ်မသုံးဖြစ်တာလည်းပါမယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ရိုက်ကွင်းပုံ လေးတွေတင်တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ မတင်ဖြစ်တော့ဘူး။မ တင်ဖြစ်တော့တာက ပရိုဂျူဆာ တွေ ဘာတွေက ရိုက်ကွင်းအခြေ အနေတွေကို ရုံတင်မှပဲ ပြသလိုတယ်လို့ ပြောလာတဲ့အတွက် မ တင်ဖြစ်တော့ဘူး။ မတင်ဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်နဲ့ပရိ သတ်နဲ့ နည်းနည်းအလှမ်းကွာသလို ဖြစ်သွားတာပါ။
''ဘိုးဘိုးရော ဖေဖေရော ဆုံးမတာ တူတာကတော့ တစ်ခုခု လုပ်မယ်ဆိုရင် သေသေချာချာ လုပ်ဖို့ကိုပဲပြော??
လှိုင်သာယာ ငွေပင်လယ် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်း တည်ဆောက်မည့် အပေါ် မြေပိုင်??
အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်များ ဦးဆောင်သည့် “Avengers” ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးချင်ကြောင်း မင်းသမီး ဘရီလာဆန်